''Olaantummaa seeraa kabachiisuufi dirree siyaasaa bal'isuu gidduutti madaala eeguun barbachisaadha'' - BBC News Afaan Oromoo
''Olaantummaa seeraa kabachiisuufi dirree siyaasaa bal'isuu gidduutti madaala eeguun barbachisaadha''
24 Fuulbaana 2020
Bulchiinsi Ministira Muummee Abiy Ahimad waggaa lama dura yeroo aangootti dhufe waadaa seeneefi raawwaten biyyattii keessattis ta'e Baha Afrikaatti kaka'umsa guddaa uumeera.
Kanaanis, MM Abiy badhaasa Nobeelii Nagaa dabalatee fudhatamummaan isaanii akka guddatu taasiseera.
Namoonni siyaasaa jajjaboo bulchiinsa MM Abiy Ahimadin waggaa lama dura dhiifama taasifameefi hidhaa bahaniifi alaa biyya seenan yeroo ammaa yakkaan shakkamanii to'annoo poolisii jala jiru.
Dabalataan, paarlaamaan Itoophiyaa filannoon sababa Covid-19 yeroo biraatti darbe akka taasifamu murteessuun isaa qeeqxonni, MM Abiy waadaa yeroo aangootti dhufan seenan akka cabsanitti fudhataniiru.
Himannaa mootummaarratti ka'u kana kan gaafataman Dubbii Himaan paartii biyya bulchu, Paartii Badhaadhinaa, Dr Biqilaa Hurrisaa ''Gara abdii kutannaafi waadaa galame balleessuutti galameera jedhee gonkumaa hin amanuus'' jechuun BBC'tti himan.
Dirree dimookiraasii yeroo jijjiiramaa dhufe ''Karaa of eeggannoofi itti gaafatamummaa qabuun fayyadamuurratti hanqinni tokko tokko ture jira,'' jedhan.
Waadaafi abdiin waggaa lama dura ture amma bakka kam jira?
MM Abiy aangoo qabatanii ji'oota muraasa turan keessatti abdiin akka biyyaaafi naannoo Gaanfa Afrikaatti gama siyaasaa fi dinagdeen ture guddaadha.
Qeeqtonni mootummaa, MM Abiy waadaa isaanii hin kabajne daandii jijiiramaa irraas maqanii ummata Itoophiyaas qabsoo saba Oromoo aangootti isaan fidees gananiiru jechuun himatu.
Ofii waadaafi abdiiwwan kun bakka yeroo sanii jiruu? jedhamanii kan gaafataman Dr. Biqilaan ''raawwatamanii jiruu'' jedhan.
Kanaafis namootni siyaasaa biyya seenuu hin dandeenye seenuu, miidiyaaleen bilisaan hojjechuu, waldaaleen hawaasaa akka bal'inaan socho'an seerri jijjiiramuu, Eertiraa waliin nagaan bu'uu akka fakkeenyaatti kaasan.
Jijjiirama siyaasaa guyyoota 100 keessatti Itoophiyaatti mul'atan
''Haata'u malee, dhaabbileen siyaasaafi qooda fudhattootni kana miira itti gaafatamummaa qabuun itti fayyadamaniirumoo itti hin fayyadamne kan jedhurratti shakkii guddaa qabna'' jedhan.
''Waadaan galame jira, ni jiraatas dhaabni fi MM waadaa kana dhugoomsuuf qabsaa'u,'' jedhan.
Dirree siyaasaa bal'isuun murannoo fi carraaqqii mootummaa qofa osoo hin taanee gahee qooda fudhattootaa barbaadas jedhaniiru.
Namoota siyaasaa jajjaboo hidhuun waadaa MM Abiy seenanii turaniin hin faallessuu jedhamanii isa gaafatamaniif ''Olaantummaa seeraa kabachiisuufi dirree siyaasaa bal'isuu gidduutti madaala eeguun barbachisaadha'' jedhan. Kun ammoo gahee qaama hundaatis jedhan.
Gama kaaniin, siyaasa Itoophiyaan itti dhiheenyaan kan hordofaniifi UK Yunivarsiitii Kiilitti barsiisaa seeraa kan ta'an Dr Awwal Qaasim Aloo MM Abiy imaanaarraa maqan jechuun kanneen isaan qeeqan keessaati.
''Waggaa lama booda wanti argaati jirru Ministirri Muummee akka nama biyyitti kana gara dimookiraasitti ceessisanitti imaanaan itti kenname osoo hin taane akka nama filannoo injifate dhufeeti haalli itti biyyattii bulchaa jiru,'' jedhan.
Kanaanis, 'gara biyyattii ceesisuutti kan hin deebine yoo taate, biyyattiin gara rakkoo guddaa deemuu dandeessi' jechuun himu.
Hidhamu qondaaltotaafi filannoo
Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa 6ffaa sababa weerara koronaavaayirasiin yeroo hin beekamneef darbee ture yaada Ministeera Fayyaa bu'uura godhachuun akka taasifamu paarlaamaan biyyattii tibbana murtesseera.
'Himannaa nurratti banuun filannoo keessaa nu baasuuf jedhameeti' - Obbo Jawaar M.
MM Abiy kana dura ALI bara 2013 keessa filannoon gaggeeffama jechuu isaanii malee yeroo ifatti taasifamu Boordiin Filannoo Biyyaalessaa hin ibsine.
Gama kaaniin ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee bakka hoggantoonni paartilee mormituu jajjaboo hidhaa jiranitti filannoon akka gaggeeffamu murtaahuu dhaabbileen siyaasaafi deeggartoonni isaanii mormii dhageessisaa jiru.
Abbootiin alangee federaalaa qondaaltota siyaasaa mormituu hookkara ajjeechaa Hacaaluu booda uumameen himannaa irratti bananiiru.
Haata'u malee, himatamtoonni 'mootummaan filannoo dura kan nu hidhef filannoorraa nu hambisuufi' jechuun himatu.
Kanaanis, paartileen mormituu dirreen siyaasaa waggaa lama dura ture dhiphateera jechuun himu.
Dhimma kanarratti kan gaafataman Dr. Biqilaan carra dhufe itti - fayyadamuurratti rakkoon ture jechuun himu.
''Dirree siyaasaa bal'atetti fayyadamuu caalaa jeequmsa uumuun humnaan siyaasa biyya kana jijjiiruuf yaaluun carraa baname miidheeraa'' jedhaniiru.
''Qaamni haqaa namoota yakka raawwachuun shakkee to'ate dhimmi isaanii mana murtiin qabamee waan jiruuf isa seerumaaf dhiisnee waan fuula duratti seerri jedhu walumaan ilaaluu wayyaa'' jechuun dubbatan.
Obbo Lidatuu Ayyaaloo meeshaa seeraan ala qabatanii argamuun himataman
Iskindir Naggaa labsii farra shororkeessummaa cabsuun himatame
''Sababa kanaatti dirree siyaasaa akka malee dhiphata jedhanii yaaddahuurra kan seeraa seeraaf dhiisanii fuulduratti deemuu wayya'' jedhan.
Filannoon yoomiifi akkamitti akka gaggeeffamu waan hin murtoofneef namootni siyaasaa hidhamanii jiraachuun filannoo adeemsifamurratti dhiibbaa inni qabaatu tilamaamuuf kan rakkatan ta'uullee dubbatan Dr. Biqilaan.
''Waliigalatti dirreen siyaasaa uumameefi haqummaafi qulqullinni filannoo gara fuulduraatti gaggeefamu hin miidhama jedhee ammatti murteessee dubbachuu hin danda'us'' jedhaniiru.
MM Abiy Ahimad wayita muudaman dirree siyaasaa baldhiisuuf waadaa galuu kan yaadatan Dr. Biqilaan, dhaabni isaanii akka dhaaba biyya bulchaa jiruutti dirree siyaasaa bal'isuuf murannoo akka qabuufi hojjechaas akka jiru ibsan.
''Qooda fudhattootni hundi yaada kana milkeessuuf gahee isaanii bahachuu dhabuun garuu yaadni kun akka hin milkoofne godhaa'' jedhan.
Himannaan hidhaa umurii guutuu Obbo Dajaneerratti dhiyaate maali?
Gama kaaniin, guyyaa Roobii kaleessaa, dhaabbileen Siyaasaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa socho'an 10 dhimmoota waloorratti waliin hojjechuuf waliigalteerra gahuu Paartii Badhaadhinaa beeksiseera.
Dubbii Himaan paartichaa Biqilaa Hurrisaa (PhD) BBC'tti akka himanitti paartileen kunneen ''garaagartummaafi waldhabdeen haala qaroomeen mariin furama'' amantaa jedhu qabu.
Dhaabbileen siyaasaa gama Oromoofi Amaaraatiin jiran fedhii ummata lameeniif kan dhaabatan ta'uu himatuu kan jedhan Dr. Biqilaan, qaamotni kun hiree biyya kanaa, nageenyaa fi tasgabbii siyaasa akkasumas guddina biyyaa kanaa keessatti hiree guddaa qabuu jedhan.
''Paartilee Amaaraa fi Oromoo Mudde bara 2012 irraa eegalee ji'oota 10'f marii gaggeessaa turan. Paartileen kun dhimmoota gurguddoo ummata lamaaniifi ummata Itoophiyaarratti erga mariyachaa turanii booda qabxiilee 10 irratti waliigaluu danda'aniru'' jechuun himan.
Dr. Biqilaan qabxiileen ijoon lamaan irratti mariyatamaniifi qabxiileen 10 irratti waliigalteen mallattaa'e maal akka ta'an ibsuu hin feene.
Paarlaamaan Itoophiyaa filannoon biyyaalessaa akka taasifamu murteesse
Dhimmii Itoophiyaa dimookitraatessuu dhimma sabaafi sablammoota biyyattii hundaati kan jedhan Dr. Biqilaan, yeroo hedduu sababni mariin dhaabbilee siyaasaafi beektotaa naannoolee lameenii kana gidduutti gaggeefamuufii ibsaniiru.
''Beektotni'' biyya kanaa hariiroo gaarii ummatoota lamaaniirratti osoo hin taane garaagartummaarratti hojjechaa waan turaniif sun ammoo gara ummataatti akka hin galleef dursee mariin kun paartilee ummatoota lamaaniif dhaabatan gidduutti gaggeeffame'' jedhan.
Xiyyeeffannoon beektotaa fi paartilee siyaasaa waan Oromoofi Amaaraa waan tureef kanaan eegallee yoo gara sabaafi sablammootaatti ce'an dhiibbaa isaa guddaa ta'a jenneeti jechuun ibsan.
Marii kana irratti gama Oromootiin paartiilee akka ABO, Paartiin Biyyaalessaa Oromoo, Koongireesii Federaalawaa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo - Tokkoome fi Paartiin Badhaadhinaa qooda fudhachuus himaniiru.
''Kunimmoo marii biyya kanaa keessatti iddoo guddaa qaba jennee amanna.''
''Fedhiin ummata Oromoo fedha ummata Amaaraan adda mitii'' kan jedhan Dr. Biqilaan, paartileen kun dhimmoota marii dabalataa barbaadan akkuma jiranitti ta'anii ammaaf qabxiilee 10 irratti waliigaluu ibsan.
Manni Maree Bakka Bu'oota Ummataa Itoophiyaa filannoon biyyaaleessaa akka taasifamu murteesse
22 Fuulbaana 2020
Obbo Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaafi kaan mana murtiitti dhiyaatanii himatni irratti baname
21 Fuulbaana 2020